HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tiv Tseky Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Nividy akanjo malalaka kokoa aho. Tsy hoe nihangeza aho akory fa tsy tiako hanara-batana ny akanjoko. Lasa nanontany an’ahy anefa ny olona raha nihena aho. Tsara bika kokoa ianao rehefa maotina ny akanjonao.”—Breanna.
“Mahazo aina kokoa aho rehefa maotina ny akanjoko. Tsy vitan’ny hoe antonona tsara an’ahy ilay izy, fa milamina koa ny saiko satria na aiza na aiza alehako, dia afaka miteny aho hoe Kristianina. Tsy manahy mihitsy aho hoe sao dia tsy mifanaraka amin’ny zavatra inoako ny paoziko.”—Keren.